Vaovao - Ahoana ny fisafidianana ny herin'ny milina fantsom-boasary?
Amin'ny fiainana andavanandro, matetika isika dia manondro ny fantsom-by miaraka amin'ny fantsom-by, fa amin'ny sehatry ny fanapahana fantsom-panafody dia tsy maintsy manavaka isika raha ny vy dia fantsom-by vy, fantsom-by vy silikika, fantsom-by tsy misy fangarony, fantsom-by firaka titanium na fantsom-firaka aliminioma. . Satria ny fitaovana samihafa dia samy manana ny mampiavaka azy toy ny hamafiny, ny hamafiny, ny hakitroky azy ary ny fanoherana ny hafanana avo, ny fomba hisafidianana ny tsaramilina fanapahana fantsom-laser fahefana?
Ny laser dia misy fiantraikany samihafa amin'ny fitaovana metaly samihafa. Ny herin'ny laser dia miovaova arakaraka ny akora vita amin'ny vy. Ohatra, miaraka amin'ny hateviny mitovy, ny herin'ny laser amin'ny fanapahana vy vy dia ambany noho ny vy vy, ary ny herin'ny laser amin'ny fanapahana vy vy dia ambany noho ny mavo. Kely ny varahina varahina. Ho fanampin'ny toetran'ny vy, ny hateviny koa dia mifandray akaiky amin'ny herin'ny laser. Ho an'ny fantsom-by iray ihany, ny herin'ny fanapahana 10mm dia ambany noho ny fanapahana 20mm.
Mikasika ny fomba hisafidianana ny hery mety, dia tokony ho tapaka araka ny karazany, ny hateviny, ny endriny ary ny anton-javatra hafa ho voapaika. Noho izany, rehefa mividy milina fanapahana fantsom-laser dia tsy maintsy ampahafantarinao ny mpanamboatra ny mampiavaka ny fitaovana izay mila hokapaina. Ny zavatra tsara indrindra dia ny manome ny fantsona ho an'ny mpanamboatra ho fanandramana.
Amin'izao fotoana izao, ny milina fanapahana fantsom-boasary laser eny an-tsena dia manana fahefana maro, manomboka amin'ny 1000W ka hatramin'ny 15000W. Ny hatevin'ny fantson'ireo mpanamboatra fanodinana dia eo anelanelan'ny 8mm-12mm. Raha manapaka ity hateviny ity ianao mandritra ny fotoana lava, dia asaina misafidy milina fanapahana fantsom-boasary 4000W-6000W. Raha varahina manana toetra mampiavaka taratra ambony izy dia asaina mampiasa milina fanapahana fantsom-by laser misy 8000W na hery lehibe kokoa. 2000W-4000W laser cutting machine no nanolorana azy ho hatevin'ny 5mm-8mm. Ny hatevin'ny 1000W ambany dia matetika no ampy. Marihina fa raha mividy milina fanapahana fantsom-boasary 6000W ianao, rehefa manapaka fitaovana misy hateviny kely manodidina ny 4mm dia azonao atao ny mampihena ny fanamafisana ny vokatra ary manitsy izany hatramin'ny 2000W ho an'ny fanapahana, izay mitsitsy angovo ary mamonjy herinaratra sy vidiny.
Fotoana fandefasana: Mey-04-2021